ब्राजिलमा बुलेटप्रुफ कार, सुरक्षा कि प्रतिष्ठा ? | Alagdhar
घरविश्वब्राजिलमा बुलेटप्रुफ कार, सुरक्षा कि प्रतिष्ठा ?
साओ पाउलो: ब्राजिलका धेरै नागरिक सवारी साधन दौडाइरहँदा कहाँ कसको गोलीबाट मारिने हो भन्ने चिन्तामा डुबेका हुन्छन् । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण आफ्नो सुरक्षाका लागि उनीहरुसँग यथेष्ट रकम पनि छैन । अर्कैले प्रयोग गरिसकेको बुलेटप्रुफ (गोली छेक्न सक्ने) कार उनीहरुको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।
साँच्चिकै सुरक्षाका लागि होस् वा अरुलाई देखाउन, निजी बुलेटप्रुफ कार धनदौलतको रवाफ देखाउन पनि प्रयोग गरिन थालेको छ । ब्राजिलमा अरु धेरै मुलुकमा भन्दा ज्यादै बढी बुलेटप्रुफ कार प्रयोग हुने मुलुकमा दर्ज भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार ब्राजिलमा विश्वमै सबैभन्दा ठूलो बुलेटप्रुफसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनमा छ । यहाँ करिब २४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बुलेटप्रुफ निर्माणसम्बन्धी उद्योग छ ।
“मलाई कार औधी मन पर्छ, तर एउटा मात्र कारका लागि यतिधेरै खर्च गर्न मलाई ठीक लागेको छैन,” एकजना कानुन व्यवसायी माउरिसियो पाउलोले बताउनुभयो । उहाँ अहिले दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको बुलेटप्रुफ भोल्भो एक्सजेड ६० चढ्दै छन् ।
पाउलोको यो ४० वर्ष पुरानो चौथो बख्तरबन्ध कार हो । ट्राफिक लाइटमा रोकिएको बेला डकैती भएपछि उहाँले पहिलो बुलेटप्रुफ कार किन्नुभएको थियो । १८ महिनाअघि छोरी जन्मिएपछि उनले अर्को पनि बुलेटप्रुफ गाडी किन्नुपरेको थियो । तर यसपटक पनि उनीसँग मितव्ययी हुनुको विकल्प थिएन ।
“असुरक्षित परिस्थितिका कारण मलाई बुलेटप्रुफ कार नै चाहिएको थियो,” उनले भने। “मैले अरुले चढेको पुरानो कार किनें किनभने थोरै पैसामा सुरक्षितसाथ घुम्ने एकमात्र विकल्प यही थियो ।” सामान्य कारलाई बुलेटप्रुफ बनाउन थप १३ हजार अमेरिकी डलर आवश्यक हुन्छ । यो रकमले त अर्को कार किन्न पनि पुग्छ । तर पुराना बुलेटप्रुफ कारको मूल्य भने १० देखि ४० प्रतिशतसम्म न्यून हुने गरेको छ ।
“यो वर्ष पुराना कारको बिक्री अझ बढ्ने देखिन्छ,” साओ पाउलोस्थित बुलेटप्रुफको काम गर्ने कम्पनीका निर्देशक फाबिओ रोभेडो डे मेल्लोले बताउनुभयो । “मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिका कारण प्रयोग भइसकेका कारको माग ह्वात्तै बढेको छ ।”
“नयाँ कारको बिक्री घट्नुको अर्थ प्रयोग भइसकेका पुराना कारको माग बढ्नु हो, किनभने मानिसले नयाँ कार खरिद गर्न सकिरहेका हुँदैनन्,” हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीमा कार्यरत व्यवस्थापक इलीयान वाकाचुकीले बताउनुभयो । उहाँ बुलेटप्रुफ गरिएको आरामदायी मर्सिडिज बेन्ज जीएलए २०० को “टेस्ट–ड्राइभ” गरिरहुनभएको थियो ।
ब्राजिलकै सबैभन्दा धनी राज्य साओ पाउलोमा सन् २०१६ मा सबैभन्दा न्यून दरमा हत्याका घटना भएका थिए । यो राज्यमा प्रति एक लाख जनतामा १०.९ हत्या भएका थिए जबकी ब्राजिलको राष्ट्रिय औसत दर ३०.३ प्रतिशत रहेको छ । ब्राजिलको उत्तरपूर्वी सर्जीप राज्यमा यो दर ६४.७ प्रशितशत रहेको छ ।
“ब्राजिलमा बुलेटप्रुफ कारले व्यक्तिको प्रतिष्ठा जनाउँछ । मानिसले आफ्नो सुरक्षाभन्दा पनि आफ्नो प्रतिष्ठालाई बढी महत्व दिएका छन् ।” पाउलोका लागि बुलेटप्रुफ सवारीसाधनले सुरक्षामै सुनिश्चित गराइरहेको छ । “यदि कसैसँग केही बढी रकम छ भने उनीहरुले आफ्नो सुरक्षामा बढी नै खर्च गर्नु स्वाभाविक हो,” उनले बताए । “पैसा नहुनेले सानो मुद्दामा पनि ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन् ।”एएफपी
अघिल्लो लेखमालैङ्गिकअल्पसंख्यकलाई छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्न अदालतको आदेश
अर्को लेखमाललितपुर क्षेत्रका ४ वटा वधशालामा शील
तिब्बत केन्द्रबिन्दु भएर ६ दशमलव २ रेक्टर स्केलको भूकम्प
कोरोनाले इटलीमा एकैदिन ४७५ जनाको मृत्यु